WAQTIGII GO'AANKA: Shanta Kooxood Ee Barcelona, Man United, Paris Saint-Germain, Liverpool Iyo Juventus Oo Todobaadkan Sugaya Go'aanka Kama Danbaysta Ah Ee Matthijs de Ligt. - Gool24.Net
WAQTIGII GO’AANKA: Shanta Kooxood Ee Barcelona, Man United, Paris Saint-Germain, Liverpool Iyo Juventus Oo Todobaadkan Sugaya Go’aanka Kama Danbaysta Ah Ee Matthijs de Ligt.
Shanta Kooxood ee kala ah Barcelona, Man United, Paris Saint-Germain, Liverpool Iyo Juventus ayaa todobaadkan sugaya go’aanka kama danbaysta ah ee uu kabtanka Ajax ee Matthijs de Ligt go’aanka kaga gaadhayo mustaqbalkiisa.
Kadib waqti dheer oo ay kooxaha Yurub ugu waa wayni ka war sugayeen da’yarka kooxda Ajax ee Matthijs de Ligt waxa la soo gaadhay todobaadkii uu balan qaaday in uu mustaqbalkiisa go’aanka ka gaadhayo.
Iyada oo laysku diyaarinayo kulamada UEFA Nations League ee uu Matthijs de Ligt ku matalayo xulkiisa Netherlands oo England kaga hor imanaya dalka Portugal, waxa uu todobaadkani u yahay kooxaha Yurub mid muhiim ah maadaama oo uu De Ligt go’aan gaadhayo.
Wargayska AS ayaa shaaciyay in kooxaha Barcelona iyo Manchester United ay hadda tartan adag kala kulmayaan kooxaha Paris Saint-Germain, Liverpool Iyo Juventus taas oo todobaadkan ka dhigi karta mid xaasaasi ah.
Manchester United iyo Barcelona ayaa waqti u muuqday labada kooxood ee kaliya ee iskugu soo hadhay saxiixa De Ligt laakiin kooxaha saddexda ah ee PSG, Liverpool iyo Juventus ayaa soo laba kacleeyay.
Paris Saint-Germain waxay doonaysaa in ay ka faa’iidaysto wakiilka De Ligt ee Mino Raiola kaas oo ay Barcelona isku khilaafsan yihiin lacagta uu dilaal ahaan uga qaadan karo heshiiska xidigan waxayna kooxda reer France doonaysaa in ay xaaladan ka faa’iidaysato.
Liverpool waxay haysataa laba arimood oo muhiim ah waxayna arinta hore tahay in Van Dijk oo hadda xulka Holland kula sugan De Ligt uu kooxdeeda wakiil khaas ah u noqon karo iyada oo waliba ay xiiso galin karto in Liverpool ay Champions League ku soo guulaysatay.
Juventus oo doonaysa in ay dib u dhis ku samayso kooxdeeda ayaa iyaduna dib u soo celisay xiisihii kabtanka Ajax ee kooxdeeda ka reebay Champions League si ay difaaceeda ugu xoojiso.
Laakiin iyada oo todobaadkan la soo gaba gabaynayo kulamada Semi-finalka iyo Finalka UEFA Nations League, waxa Matthijs de Ligt todobaadkan gaadhayaa go’aanka mustaqbalkiisa isaga oo xulan doona kooxda uu ku biiri doono.
Matthijs de Ligt ayaa cadeeyay in uu haysto doorashooyin badan laakiin waxa uu cadeeyay in uu doonayo sidii uu doorashada ugu fiican u xulan lahaa.
Si kastaba ha ahaatee, shanta kooxood ee aan soo sheegnay oo lagu daray Man City iyo Real Madrid oo aan iyaguna wali quusan ayaa arki doona waxa uu go’aanka Matthijs de Ligt noqon doono.